I-Vee24: Ukuzibandakanya ngokuBonakalayo kweVidiyo kuyonyusa ukuguqulwa ngama-38% | Martech Zone
Kule veki, bendinamava amangalisayo okusasaza Vee24Isisombululo sevidiyo esikwi-intanethi kwiwebhu. Inkampani ibijikeleze iminyaka embalwa ifezekisa indibaniselwano yesoftware kunye nesoftware njengesisombululo senkonzo efikelelekayo ngokumangalisayo.
Intoni Vee24 ufeze into emfutshane ngokumangalisayo. Xa umthengi ekusayinela u, baqala bathenge i-Hardware, ebandakanya inqaba enekhamera yevidiyo, ukukhanya kwangaphambili, iliso losasazo kunye nokukhanya komoya. Ikhompyuter ilinda i-24 ″ yokujonga isikrini esisebenza ngeWindows 7 kunye nesicelo seVee24.
Isoftware ayivele ivuleke kwaye iqale ividiyo. Kuvela i-div emnandi ekubonelela ngokuncokola nomntu kwelinye icala. I-popup ingaqaliswa ngummeli, iqaliswe ngokuzenzekelayo, okanye umsebenzisi angacofa ithebhu enhle kwicala lesikrini ukuze aqalise.
Ukuba umsebenzisi uyasamkela isimemo, isoftware iyakudibanisa nommeli. Ngokuhambelana nokuvulwa kwengxoxo yevidiyo (ungavula ikhamera yakho, ummeli unokubona zonke iinkcukacha zesikhangeli sakho (Inkqubo yokuSebenza, isiKhangeli, njl.njl.) Kunye nephepha elinobukhulu obufanayo. Kwindlela yokubonelela ngobuninzi bezindlu.
Mhlawumbi eyona nto imangalisayo kukuba iVee24 ikwanayo nenxalenye yesabelo-evumela amaxwebhu, iipowerpoints okanye nayiphi na enye ifayile ukuba ivulwe kwaye kwabelwane ngayo. Awunokwabelana kuphela… unganxibelelana nommeli. Umphathi omkhulu u-Andy Henshaw wandikhapha eodola iholide kwenye indawo ... amava ayengakholeleki, ngekhe kubelula. Sobabini sikwazi ukwenza utshintsho kwifomu kwiphepha elinye, ngaxeshanye kwaye sayithumela!
Iziphumo zabaxhamli beVee24 sele zimangalisa… iinkampani ezinje ngeFord, iLexus, iLands 'End, iMini Couper, iHeels.com kunye nezinye iinkampani ezingamakhulu zibona Ukuphakama kwama-38% kumanqanaba okuguqula. Impendulo yabathengi yale nkqubo ibuye yangabikho kwiitshathi.
Nanku umboniso wevidiyo weVee24 kwihlabathi le-Intanethi:
Ngelixa uninzi lweziphumo ezikhawulezileyo zibonwa ngokuthengisa, andinakucinga ukuba loluphi utyalo-mali kwisoftware enje enokuyenza ukugcina abathengi kwiSoftware njengeenkampani zeNkonzo. Ukukwazi ukubonana kunye nokwabelana ngescreen kuya kwenza inkonzo yabathengi ibe lula endaweni yobusuku obukhoyo ngoku! Kubonakala ngathi iVee24 ayisiyiyo nje inkokeli kolu shishino, kuphela kwenkampani enikezela le nkonzo ngoku. Ngokuqinisekileyo baya kuphumelela kakhulu! Sele sibabetha ngenxa yokuzibandakanya.
Ungalibali ukubazisa ukuba ufumene malunga nenkonzo Martech Zone!
tags: I-Gmail (Android)Imeyile ye-Yahoo (i-Desktop)
Ixesha leendaba kwiNtlalo
Juni 20, 2011 ngo-1: 44 PM
Kwi-vee24: Andikwazanga ukuvuma ngakumbi. Sisebenzisa i-vee24 suite kubaxumi abambalwa kwimarike yaseJamani kwaye iyamangalisa. Kodwa yintoni ebaluleke njengetekhnoloji: inceda abathengi bethu ukuqhuba ishishini. Ngokombono wam le yenye yezona ndlela zisebenzayo zokuvelisa izikhokelo kunye nokuthengisa okongeziweyo kwi-intanethi!